Mogadishu Journal » Brazil vs Argentina ayaa la hakiyay ka dib markii saraakiisha caafimaadka ay joojiyeen
Ciyaartii Brazil ee isreebreebka Koobka Adduunka ee Argentina ayaa la hakiyay ka dib markii mas'uuliyiinta caafimaadka iyo booliiska Brazil ay galeen garoonka ciyaarta si ay u xiraan afar ciyaartooy oo reer Argentine ah oo ku guuldareystay inay karantiil sameeyaan ka dib markii ay dalka soo galeen.
Muuqaallada sida dhabta ah isu dhiibay, ciyaarta ayaa la joojiyay toban daqiiqo kadib dhacdada. Kahor intaan la bilaabin afarta kooxood ee Premier League Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso iyo Emiliano Buendia ayaa waxaa baaritaan ku sameeyay mas'uuliyiinta Brazil si ay u jebiyeen xeerarka coronavirus.
Waxaa lagu eedeeyay inay ku guuldareysteen inay caddeeyaan inay joogeen England kahor imaanshaha Brazil. Waqtigaan, qof kasta oo sidan sameeya waxaa laga rabaa inuu karantiil ku sameeyo 14 maalmood laakiin ciyaartoydu ma aysan sameynin - sababo cad awgeed.
Baaritaan ka dib waxay u muuqatay in afarta kooxood ay cad yihiin iyadoo Lo Celso iyo Romero ay labaduba ku soo bilaawdeen ciyaarta halka Martinez iyo Buendia keydka lagu magacaabay.
Si kastaba ha ahaatee, is -weydaarsiga furitaanka saraakiisha caafimaadka Brazil ayaa gudaha u galay garoonka iyagoo isku dayaya inay xidhaan ciyaartooyda.
Wax yar ka dib markii xulka Argentina uu ku soo laabtay qolka labiska iyadoo kabtan Lionel Messi uu u soo baxay inuu ciyaaro dhexdhexaadiye dhowr daqiiqo ka dib.
Kaddib ku dhawaad ​​saacad ismari waa, CONMEBOL ayaa ugu dambayntii bayaan ka soo saartay arrinta oo u qornayd sidan: “Go’aanka garsooraha ciyaarta, ciyaarta ay qabanqaabisay FIFA ee u dhaxaysa Brazil iyo Argentina ee isreebreebka Koobka Adduunka.